रुघाखोकी लाग्यो ? जँचाइहाल्नुस्, स्वाइन फ्लू पनि हुनसक्छ ! – shubhabihani
Home / स्वास्थ्य / रुघाखोकी लाग्यो ? जँचाइहाल्नुस्, स्वाइन फ्लू पनि हुनसक्छ !
Posted by: admin in स्वास्थ्य August 7, 2017	Comments 61 Views
Previous: रेणुले जितेपछि प्रकाश दाहालले ओलीलाई होच्याउँदै के भने ?
Next: ललितपुरमा प्रहरीले कसको ‘इन्काउन्टर’ गर्यो ? दुई पेस्तोल पनि भेटियो
काठमाडौँ — मुटु रोगी वा यससम्बन्धी उच्च जोखिम भएकालाई जाडो याममा ‘मर्निङ’ वा ‘इभनिङ’ वाकले ...